Ahoana ny fampiasana dokambarotra StumbleUpon sy StumbleUpon
Alarobia, Desambra 9, 2015 Alakamisy Janoary 7, 2016 Douglas Karr
Angamba ny tranokala sosialy ambany sy ambany indrindra hitanay izay nahasarika ny fifamoivoizana ho an'ny tranonkalantsika manokana sy ny mpanjifanay dia StumbleUpon. StumbleUpon dia manana mpampiasa 30 tapitrisa mahery. StumbleUpon dia manolotra traikefa amin'ny mpampiasa organika ary koa serivisy fitadiavana karama, StumbleUpon Ads. Sehatra iray mampiankin-doha ity izay miteraka fifamatorana lalina amin'ireo mpampiasa azy. Ny salanisan'ny Fandavoana ho an'ny vehivavy dia 30 minitra, 22 minitra ho an'ny lehilahy. Raha ny marina, 15%
Social Buzz Club: mizara ary zarao
Alakamisy, Aprily 18, 2013 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Iray amin'ireo lafiny lehibe amin'ny fanatrehana fihaonambe toy ny World Media Marketing World dia ny fialanao amin'ny fampiononana ny tamba-jotra ary miditra amin'ny maro hafa. Na inona na inona haben'ny tambajotranao, matetika ianao dia voafetra amin'ny vaovao sy vaovao zaraina ao anatiny. Manampy anao amin'ny tambajotra vaovao be dia be ny fandehanana any amin'ny kaonferansa iraisam-pirenena toa izao. Nihaona tamina olona an-taonina tany San Diego izahay ary mbola hanohy
Misy antony mahatonga antsika mampiasa sary be dia be eto Martech Zone… mety io. Na dia ny votoatin'ny lahatsoratra aza no ifantohana, ny sary dia mandanjalanja ireo pejy ary manome fitaovana ho an'ireo mpamaky mba hahazoany fahatsapana eo noho eo izay ho avy. Ny sary dia paikady ambany raha ny amin'ny fampivoarana ny atiny. Raha mbola tsy nanao ianao - andramo ny manome sary isaky ny antontan-taratasy, lahatsoratra na pejy eo amin'ny anao